MB 2017 Abriil, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Anigoo damacsan inaan iyada siiso waxa ugu wanaagsan, waxaan raacay Tammy (xaaskeyga) qadada Burger King (Sida aad adigu dhadhansiiso), ka dibna u dhig boqoradda caanaha ee macaan (Mal etwas anderes). Waxaad u maleyn kartaa inay tahay inaan ka xishoodo adeegsiga muuqaalka ah ee halkudhigyada shirkadda, laakiin sida McDonalds dhigayo: "Waan jeclahay". Hadda waan kuu baahanahay (iyo gaar ahaan Tammy!) cafis weydiiso oo iska dhaaf kaftanka nacasnimada ah. Cafisku waa muftaax u ah dhisida iyo xoojinta cilaaqaadka sii adkaysanaya oo xoogaysanaya. Tani waxay khusaysaa xidhiidhka ka dhexeeya maareeyayaasha iyo shaqaalaha, ragga iyo naagaha, iyo sidoo kale waalidiinta iyo carruurta - cilaaqaadka aadanaha ee nooc kasta.
Dambi dhaafku sidoo kale waa qayb muhiim ka ah xiriirka Ilaah innaga qabo. Ilaah, oo ah jacayl, ayaa aadanaha ku daboolay buste cafin ah oo si shuruud la'aan ah uu noogu shubay (micnaheedu waa inaan helno cafiskiisa si aan qummanayn oo aan tixgelin lahayn). Markii aan ku helno cafis Ruuxa Quduuska ah oo aan ku dhex noolaano, waxaan ku helnaa faham wanaagsan oo ah sida weyn ee jacaylka Eebbe, ee lagu muujiyey dembidhaafkiisa, uu dhab yahay. Markii uu David ka fekerayay jacaylka Ilaah u qabo aadanaha, wuxuu qoray: “Markaan arko samooyinka, farahaaga, dayaxa iyo xiddigaha aad diyaarisay: waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga iyo ilmaha ilmaha, inaad isaga u daryeesho? » (Sabuurradii 8,4: 5). Aniga qudhayduba waa la yaabi karaa markaan ka fiirsado: xoogga weyn iyo deeqsinimada Eebbe abuurista iyo hagaajinta adduunkeenna ballaaran, oo ay kujirto adduunyo, uu ogaa, geeridiisa wiilkiisa, intii ay muuqan lahayd mid aan yarayn oo runtii kuwa dembiga leh. Abuuritaan adiga iyo anagaba ah ayaa u baahan doona.
Galatiya 2,20, Bawlos wuxuu qoraa sida uu ugu faraxsan yahay in Ciise Masiix, kan ina jeclaaday, nafsaddiisa isu bixiyey. Nasiib darrose, runtan cajiibka ah ee injiilka waxaa ku hafiyay “qaylada” adduunkeena dhaqsaha badan. Haddii aan taxaddar laheeyn, waxaan lumineynaa feejignaanteena waxa Qorniinku ka leeyahay jacaylka Eebbe, oo lagu muujiyey cafiska weyn. Mid ka mid ah casharada ugu xiisaha badan ee Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan jacaylka cafiska Eebbe iyo nimcadiisa waa masaalkii Ciise ee wiilkii canaanta lahaa. Fiqiga caanka ah Henry Nouwen wuxuu sheegay inuu waxbadan ka bartay arintaas markii uu eegay sawirka Rembrandt sawirka "Soo celinta wiilka Prodigal." Waxay muujineysaa murugada wiilka cibaadada leh, darnaanta xaq darrada ah ee masayrka walaalkii xanaaqsan, iyo cafiska lama huraanka ah ee aabbaha Ilaah matalayo.
Tusaale kale oo qoto dheer oo jacaylka cafiya ee Ilaah waa maahmaahda la dejiyey ee lagaga hadlay kitaabka Hoosheeca. Waxa ku dhacay Hoosheeca noloshiisa waxay muujineysaa jacaylka shuruud la'aanta ah ee Eebbe iyo cafiska weyn ee reer binu Israa'iil, oo inta badan madax adag, oo u adeegta sidii muujinta xad dhaafka ah ee dembidhaafkiisa, oo la siiyo dadka oo dhan. Ilaah wuxuu u sheegay Hoosheeca inuu guursado naag dhillo ah oo la odhan jiray Gomer. Qaar baa aaminsan inay macnaheedu tahay haweeney ka timid boqortooyada woqooyiga Israel ee ruuxiga ah. Si kasta ha noqotee, ma ahayn guurka qofku sida caadiga ah u jeclaan lahaa, maadaama Gomer uu si isdaba joog ah uga tegey Hoosheeca si uu ugu noolaado nolol dhillo. Hal dhibic ayaa la sheegaa in Hosea Gomer la rumeysan yahay inuu ka soo iibsaday ganacsatada addoonsiga, laakiin waxay sii waday inay u orodo kuwa ay jecel yihiin ee u ballanqaaday helisteeda. Waxaan rabaa inaan daba ordo kuwa i jeclaa, ayay tidhi, “oo i siiya kibistayda iyo biyahayga, iyo suufka, iyo flax, saliid iyo cabbitaan” (Hoosheeca 2,7). In kasta oo ay isku dayeen Hoseel oo dhan inay ka horjoogsato inay sidaas sameyso, waxay sii waday raadinta wehel dembi leh oo ay la yeelato kuwa kale.
Aad bay u taabanaysaa sida Hoosheeca u sii waday soo dhaweyntiisa naagtiisa xunxun - waxay sii waday inay jeclaato oo u shiddo iyada oo shuruud la’aan ah. Waxaa laga yaabaa Gomer inuu isku dayo inuu wax sameeyo hadda iyo hadaba, laakiin haddii ay sidaas tahay, qoomamo-qoomameeyaasheedu way soo gaabiyeen. Waxay si dhakhso leh ugu soo noqotay qaabkeedii nololeed ee sinada si ay uga daba gasho kuwa jecel.
Hoosheeca jacaylka iyo cafiska ah ee Hosea ee Gomer wuxuu muujinayaa daacadnimada Eebbe xitaa haddii aan daacad u ahayn isaga. Dambi dhaafkan shuruudda leh kuma xirna sida aan ugu dhaqano Ilaah, laakiin waa kan Ilaah yahay. Sida Gomer, waxaan aaminsanahay inaan nabad ku heli karno markaan galno qaabab cusub oo addoonsiga; Waxaan diidnay jacaylka Eebbe anagoo isku dayna inaan jidkeenna gaarno. Hal mar, Hosea Gomer wuxuu ku qasbanaaday inuu iibsado alaabada. Ilaah, oo ah jacayl, wuxuu bixiyay madaxfurasho aad u sareeya - wuxuu siiyay wiilkiisii ​​uu jeclaa Ciise "qof walba badbaadada" (1 Timoteyos 2,6). Eebbe oo aan xasilloonayn, weligiis fashilmin, jacayl aan dhammaad lahayn "wax walba wuu adkaystaa, wax kasta wuu rumaystaa, wax kasta wuu rajeeyaa, wax walba wuu u dulqaataa" (1 Korintos 13,7). Waxay sidoo kale cafiyaa wax kasta, maxaa yeelay jacaylku "ma tiriyo shar" (1 Korintos 13,5).
Qaar ka mid ah akhrinta sheekada Hosheeca ayaa laga yaabaa inay diidaan in cafiska soo noqnoqda iyada oo aan la qoomameynin waxay sii xoojineysaa dembiilaha dembiilaha - ujeedku waa in dabeecadda dambiilaha la oggolaaday. Kuwo kale ayaa ku doodi kara in cafis soo noqnoqda ay horseedayso dambiilaha inuu aamino inuu ka baxsado wax kasta oo uu doonayo inuu sameeyo. Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho cafis deeqsinimo leh, waxaa lagama maarmaan ah inaad qirato in cafiskaan loo baahan yahay - iyadoo aan loo eegin inta jeer ee la cafiyo. Kuwa u malaynaya inay u istcimaayaan cafiska Eebbe si loo caddeeyo dembiyada soo noqnoqonaya weligood ma helayaan dambi dhaaf sababtoo ah qofka ayaa lahayn fahamka ah in cafis loo baahan yahay.
Adeegsiga buunbuuninta ee buunbuunintu waxay muujineysaa diidmada halkii la aqbali lahaa nimcada Ilaah. Maahmaahda noocan oo kale ahi waligeed uma horseedayso xiriir farxad leh, oo lala heshiisiinayo Ilaah. Si kastaba ha noqotee, diidmada noocan ahi ma keenayso in Ilaah ka noqdo dalabkiisii ​​cafiska. Ilaah wuxuu cafis siiyaa Masiixa dhammaan dadka aan shardi u ahayn iyadoo aan loo eegeyn cidda aan nahay ama waxaan qabanno.
Kuwaas oo leh nimcada Ilaahay shuruud la’aan ku xidhan (sida wiilkii canugga ahaa) u qaatay, cafiskaan ma ahan mid loo maleynayo. Ogaanshaha in loo cafiyo si shuruud la'aan ah, falcelintooda maahan kibir ama diidmo, laakiin waxay tahay xasillooni iyo mahadnaq, taas oo muujineysa rabitaanka ah in cafiska loo soo celiyo naxariis iyo jacayl. Markii aan helno cafis, maskaxdeena ayaa laga soocay xannibaadaha si dhaqso leh u dhista derbiyadeena, ka dibna waxaan la kulannaa xorriyadda aan ku kobcinno xiriiradaheena. Sidoo kale waa sax haddii aan shuruud la'aan ku cafino kuwa nagu dembaabay.
Maxay tahay sababta aan ugu baahan nahay inaan shuruud la'aan u cafino dadka kale ee nagu khaldamay? Sababta oo ah waxay u dhigantaa sida Ilaah noogu cafiyey Masiixa. Aynu si gaar ah u eegno bayaannada Bawlos:
Laakiin idinka midkiinba midka kale ha u roonaado oo ha u qalbi jilicsanaado, oo ha is cafiyo sidii Ilaah ugu cafiyey xagga Masiixa (Efesos 4,32).
Haddaba sidaas oo kale haatan u eg kuwa Ilaah doortay, sida quduusiin iyo kuwa la jecel yahay, naxariis daran, roonaan, is-hoosaysiin, qaboobaan, dulqaad, Midkiinba midka kale ha u dulqaato oo ha cafiyo haddii mid ka cabanayo mid kale; Sidii Rabbigu idiin cafiyey, idinkuna waad cafiyaysaa! Laakiin wax walba oo ka sarreeya ayaa soo jiidanaya jacaylka, kaas oo ah xidhiidhka kaamilnimada (Kolosay 3,12: 14).
Haddii aan helno oo aan ku raaxaysanno cafiska shuruudda la’aanta ah ee Ilaah ina siiyay Masiixa, runtii waan ku qaddarin karnaa barakada wadaagista nolosha, xiriir-dhiska, cafiska shuruudda u leh dadka kale magaca Masiix.
Farxadda sida cafisku u barakeeyey xiriirkeyga.
Cafis waa furaha muhiimka ah ee xiriirka wanaagsan